Spartacus | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE! Spartacus | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE!
Ny tena mahafinaritra slot miraingiraingy azon'ny lalao roa heny no endri-javatra, Spartacus tsotra izao iray amin'ireo tsara indrindra-tserasera slots hilalao. Maro ny olona mbola tsy nilalao alohan'ny lalao ity ny fampidirana ny finday-namana dika. Zavatra tsy manintona slots lalao dia vokatry ny WMS ny famoronana izay miezaka foana hanome mpiloka amin'ny zavatra hafa sy ny zavatra tsara kokoa. Ankehitriny izany dia ny fanatitra hohanina ho 5×4 miraingiraingy azon'ny ary 5×12 goavam tena slot lalao mba hahazo loka lehibe ny sasany avy amin'ny tsy hanahirana ny finday. Azonao atao ny mihevitra azy io ho toy ny roa ao anatin'ny iray slot lalao izay afaka manampy anao handresy malalaka.
Voalohany attractions ity lalao:
Ny mifanitsy amin'izy Spartacus tany stacked satria misy endrika roa slot reels, iray ihany no 5×4 fa ny anankiray kosa 5×12 amin'ny 100 paylines. Ho lehibe mahafinaritra hametraka ny vola eo amin'ny niisa satria hahazo valisoa amin'ny jackpot, raha hatao ka vao nahavita ny mandresy fitambaran'ny. Ny foto-kevitry ny lalao mihitsy misarika ny mpiloka. Spartacus dia romanianina mahery fo, izay andevo mpitarika voalohany ary taty aoriana dia lasa malaza Gladiator. Ity lalao ity Mampahatsiahy anao ny lehibe mpiady sy WMS dia niezaka ny tsara indrindra ny hampivelatra ny lalao manodidina Spartacus 'ny fiainan'.
Tsara ny hilalao amin'ny vato fisaka sy ny efijery lehibe:
Spartacus Gladiator ny Roma slots lehibe mitaky efijery. Afaka mankafy azy io amin'ny fomba tsara kokoa, raha milalao izany eo amin'ny takelaka, na eo amin'ny solosaina. Tao amin'ny efijery kely tsy dia ratsy aza satria mbola hankafy ny firentin 'ny foto-kevitra. Tapaka ny mpandraharaha tsy nampandefitra ny lohahevitry ny lalao, satria ny marika rehetra mifandray Spartacus. Ny fototra mozika ihany koa ny toa toy ny ady feo izay mampitombo mahaliana ny mpiloka.
Any no amboary ho Fandresena lehibe satria tsy nampoizina:
Spartacus Gladiator ny Roma tsy mamela anao midina hatrany tany izy satria lehibe ny sasany marika eo amin'ny miraingiraingy azon'ny. Manam-pahaizana milaza fa ny mpiloka dia afaka mahazo ny sasany Fandresena lehibe amin'ny fotoana rehetra satria dia antenaina ao ity lalao ity fa afaka mandresy miaraka tanety indray, ary indray. Izany dia manolotra anao 8 na mihoatra maimaim-poana-spins, raha tanety ny bibidia famantarana eo amin'ny miraingiraingy azon'ny izay mahazo nitatra tamin'ny 5×12 miraingiraingy azon'ny mba hanatsara ny mandresy vola. Izany dia manolotra anao 8-20 spins maimaim-poana izay miankina amin'ny tampon-tanety ianao-tanety ao amin'ny reels.
Mpiloka mahay mitendry Bet ambany indrindra sy ambony indrindra ny 0.50p Bet amin'ny € 250. Ny vola mba handresena ao ambony indrindra ao ity lalao ity 1250 isaky ny andalana izay winnable raha tsara vintana ianao sy milalao amim-pahendrena.
UK Slots tombontsoa Online – Get ny £ 5 Free!